2017 | Language Century Language Century
9:45 PM C-Word , Chinese
နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တွေကို တရုတ်လို ပြောတတ်စေဖို့ ဒီသင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာထားနိုင်ပါတယ်။
点钟 diǎn zhōng
တျန်ကျုံးh(င်) - နာရီ
分钟 fēn zhōng
ဖဲင်းfကျုံးh(င်) - မိနစ်
秒钟 miǎo zhōng
မြောင်ကျုံးh(င်) - စက္ကန့်
刻钟 kè zhōng
ခဲါ့ကျုံးh(င်) - ၁၅ မိနစ်
一点 yì diǎn
ယိတျန် - ၁ နာရီ
两点 liǎng diǎn
လျန်း(င်)တျန် - ၂ နာရီ
三点 sān diǎn
စန်းတျန် - ၃ နာရီ
四点 sì diǎn
စွတ်တျန် - ၄ နာရီ
五点 wǔ diǎn
ဝူးတျန် - ၅ နာရီ
六点 liù diǎn
လျို့တျန် - ၆ နာရီ
七点 qī diǎn
ချီးတျန် - ၇ နာရီ
八点 bā diǎn
ပါးတျန် - ၈ နာရီ
九点 jiǔ diǎn
ကျိုးတျန် - ၉ နာရီ
十点 shí diǎn
ရှီးhတျန် - ၁၀ နာရီ
十一点 shí yī diǎn
ရှီhယီးတျန် - ၁၁ နာရီ
十二点 shí èr diǎn
ရှီhအဲာ့rတျန် - ၁၂ နာရီ
一点零五分 yì diǎn líng wǔ fēn
ယိတျန်လင်း(င်)ဝူဖဲင်းf - တစ်နာရီ ငါးမိနစ်
两点十分 liǎng diǎn shí fēn
လျန်း(င်)တျန်ရှီhဖဲင်းf - နှစ်နာရီဆယ်မိနစ်
一刻 yí kè
ယီခဲါ့ - ၁၅ မိနစ်
三点一刻 sān diǎn yí kè
စန်းတျန်ယီခဲါ့ - ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်
ပန့် - တဝက်
四点半 sì diǎn bàn
စွတ်တျန်ပန့် - ၄ နာရီခွဲ
三刻 sān kè
စန်းခဲါ့ - ၄၅ မိနစ်
五点三刻 wǔ diǎn sān kè
ဝူးတျန်စန်းခဲါ့ - ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်
六点四十分 liù diǎn sì shí fēn
လျို့တျန် စွတ်ရှီhဖဲင်းf - ၆ နာရီ ၄၀ မိနစ်
七点整 qī diǎn zhěng
ချီးတျန်းကျဲင်h(င်) - ၇ နာရီတိတိ
差两分八点 chā liǎng fēn bā diǎn
ချားhလျန်(င်)ဖဲင်းf ပါးတျန် - ၈ နာရီထိုးဖို့ ၂ မိနစ်
九点过五分 jiǔ diǎn guò wǔ fēn
ကျိုးတျန်ကော့ ဝူဖဲင်းf - ၉ နာရီ ၅ မိနစ်
一分钟 yì fēn zhōng
ယိဖဲင်းfကျုံးh(င်) - ၁ မိနစ်
两分钟 liǎng fēn zhōng
လျန်(င်)ဖဲင်းfကျုံးh(င်) - ၂ မိနစ်
一秒钟 yì miǎo zhōng
ယိမြောင်ကျုံးh(င်) - ၁ စက္ကန့်
နာရီ၊ မိနဈ၊ စက်ကနျ့တှကေို တရုတျလို ပွောတတျစဖေို့ ဒီသငျခနျးစာလေးကို လလေ့ာထားနိုငျပါတယျ။
တနျြကြုံးh(ငျ) - နာရီ
ဖဲငျးfကြုံးh(ငျ) - မိနဈ
မွောငျကြုံးh(ငျ) - စက်ကနျ့
ခဲါ့ကြုံးh(ငျ) - ၁၅ မိနဈ
ယိတနျြ - ၁ နာရီ
လနျြး(ငျ)တနျြ - ၂ နာရီ
စနျးတနျြ - ၃ နာရီ
စှတျတနျြ - ၄ နာရီ
ဝူးတနျြ - ၅ နာရီ
လြို့တနျြ - ၆ နာရီ
ခြီးတနျြ - ၇ နာရီ
ပါးတနျြ - ၈ နာရီ
ကြိုးတနျြ - ၉ နာရီ
ရှီးhတနျြ - ၁၀ နာရီ
ရှီhယီးတနျြ - ၁၁ နာရီ
ရှီhအဲာ့rတနျြ - ၁၂ နာရီ
ယိတနျြလငျး(ငျ)ဝူဖဲငျးf - တဈနာရီ ငါးမိနဈ
လနျြး(ငျ)တနျြရှီhဖဲငျးf - နှဈနာရီဆယျမိနဈ
ယီခဲါ့ - ၁၅ မိနဈ
စနျးတနျြယီခဲါ့ - ၃ နာရီ ၁၅ မိနဈ
ပနျ့ - တဝကျ
စှတျတနျြပနျ့ - ၄ နာရီခှဲ
စနျးခဲါ့ - ၄၅ မိနဈ
ဝူးတနျြစနျးခဲါ့ - ၅ နာရီ ၄၅ မိနဈ
လြို့တနျြ စှတျရှီhဖဲငျးf - ၆ နာရီ ၄၀ မိနဈ
ခြီးတနျြးကြဲငျh(ငျ) - ၇ နာရီတိတိ
ခြားhလနျြ(ငျ)ဖဲငျးf ပါးတနျြ - ၈ နာရီထိုးဖို့ ၂ မိနဈ
ကြိုးတနျြကော့ ဝူဖဲငျးf - ၉ နာရီ ၅ မိနဈ
ယိဖဲငျးfကြုံးh(ငျ) - ၁ မိနဈ
လနျြ(ငျ)ဖဲငျးfကြုံးh(ငျ) - ၂ မိနဈ
ယိမွောငျကြုံးh(ငျ) - ၁ စက်ကနျ့
သင့် ချစ်သူရည်းစားက ဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲ။
6:32 PM C-Word , Chinese
တရုတ်စကား လေ့လာတဲ့အခါ တချို့စကားလုံးတွေက အဘိဓာန်ထဲမှာ အသေးစိတ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် မပါဝင်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ မိမိအနေနဲ့ ရေရေရာရာ မသိဘဲ ဝေါဟာရတစ်ခုခုကို သုံးမိမယ်ဆိုရင် တဖက်သားက အထင်အမြင်လွဲသွားတတ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မိမိရဲ့ ချစ်သူရည်းစားကို တခြားသူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ စကားလုံးရွေးချယ်မှုကို အထူး သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ချစ်သူကို 恋人 liàn rén, 情人 qíng rén, 爱人 ài rén ဆိုပြီး ဝေါဟာရသုံးမျိုး ရှိပါတယ်။
恋人 liàn rén ဆိုတာက မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်ပြီး၊ တကယ်လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တွဲနေတဲ့ ချစ်သူရည်းစားကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ တကယ် ညားမညားကတော့ ကံပေါ့နော်။
情人 qíng rén ဆိုတာက အီစီကလီပုံစံမျိုးနဲ့ ဆန္ဒ'sex' အတွက် ဦးစားပေးပြီး၊ အပျော်သဘောတွဲနေတဲ့ ချစ်သူရည်းစားကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
爱人 ài rén ဆိုတာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်ခွင့်လွှတ်မှုအပြည့်နဲ့ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေကို ခေါ်တာပါ။ ဒီဝေါဟာရက များသောအားဖြင့် လက်ထပ်ပြီးမှ သုံးတာပါ။ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ချစ်သူရည်းစားဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သုံးချင်ရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့ လုံးဝသေချာတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဥပမာ- လူသိရှင်ကြား တရားဝင် စေ့စပ်ထားတဲ့ ချစ်သူရည်းစားတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
女朋友 nǚ péng yǒu ကတော့ 恋人 liàn rén အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါပဲ။
ကိုရီးယားစကား 여자 친구 ကို တရုတ်သံနဲ့ ပြောချင်ရင်တော့ 要砸亲故 yào zá qīn gù လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။
အချစ်ဦး၊ ရည်းစားဦးကိုတော့ 初恋情人 chū liàn qíng rén လို့ခေါ်ပါတယ်။
အဆက်ဟောင်း၊ ရည်းစားဟောင်းကိုတော့ 前女友 qián nǚ yóu လို့ခေါ်ပါတယ်။
သငျ့ ခဈြသူရညျးစားက ဘယျလိုအမြိုးအစားလဲ။
တရုတျစကား လလေ့ာတဲ့အခါ တခြို့စကားလုံးတှကေ အဘိဓာနျထဲမှာ အသေးစိတျ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုခကျြ မပါဝငျပါဘူး။
အဲဒီတော့ မိမိအနနေဲ့ ရရေရောရာ မသိဘဲ ဝေါဟာရတဈခုခုကို သုံးမိမယျဆိုရငျ တဖကျသားက အထငျအမွငျလှဲသှားတတျပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ မိမိရဲ့ ခဈြသူရညျးစားကို တခွားသူတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးတဲ့အခါ စကားလုံးရှေးခယျြမှုကို အထူး သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
ခဈြသူကို 恋人 liàn rén, 情人 qíng rén, 爱人 ài rén ဆိုပွီး ဝေါဟာရသုံးမြိုး ရှိပါတယျ။
恋人 liàn rén ဆိုတာက မွတျမွတျနိုးနိုးခဈြပွီး၊ တကယျလကျထပျဖို့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ တှဲနတေဲ့ ခဈြသူရညျးစားကို ရညျညှနျးပါတယျ။ တကယျ ညားမညားကတော့ ကံပေါ့နျော။
情人 qíng rén ဆိုတာက အီစီကလီပုံစံမြိုးနဲ့ ဆန်ဒ'sex' အတှကျ ဦးစားပေးပွီး၊ အပြျောသဘောတှဲနတေဲ့ ခဈြသူရညျးစားကို ရညျညှနျးပါတယျ။
爱人 ài rén ဆိုတာက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ နားလညျခှငျ့လှတျမှုအပွညျ့နဲ့ မွတျမွတျနိုးနိုး ခဈြကွတဲ့ ခဈြသူတှကေို ချေါတာပါ။ ဒီဝေါဟာရက မြားသောအားဖွငျ့ လကျထပျပွီးမှ သုံးတာပါ။ ဇနီး သို့မဟုတျ ခငျပှနျးလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ တကယျလို့ ခဈြသူရညျးစားဆိုတဲ့ သဘောမြိုး သုံးခငျြရငျတော့ လကျထပျဖို့ လုံးဝသခြောတဲ့ အခွအေနမြေိုး ဥပမာ- လူသိရှငျကွား တရားဝငျ စစေ့ပျထားတဲ့ ခဈြသူရညျးစားတှကေို ရညျညှနျးပါတယျ။
女朋友 nǚ péng yǒu ကတော့ 恋人 liàn rén အဓိပ်ပာယျမြိုးပါပဲ။
ကိုရီးယားစကား 여자 친구 ကို တရုတျသံနဲ့ ပွောခငျြရငျတော့ 要砸亲故 yào zá qīn gù လို့ပွောနိုငျပါတယျ။ ခဈြသူဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါပဲ။
အခဈြဦး၊ ရညျးစားဦးကိုတော့ 初恋情人 chū liàn qíng rén လို့ချေါပါတယျ။
အဆကျဟောငျး၊ ရညျးစားဟောငျးကိုတော့ 前女友 qián nǚ yóu လို့ချေါပါတယျ။
猴赛雷 hóu sāi léi ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
5:49 PM C-Idiom , Chinese
တရုတ်စကားပြောကြတဲ့အခါ တချို့အသုံးအနှုန်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့မရပါဘူး။ စကားလုံးရဲ့ ရင်းမြစ်တွေကို သိထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီစကားလုံးကို တစ်လုံးချင်းဘာသာပြန်ရင်တော့ -
(n) 猴 hóu မျောက်
(n) 赛 sāi ဗူးဆို့
(n) 雷 léi မိုးကြိုး။ မိုင်း
အမှန်တော့ 猴赛雷 hóu sāi léi ဆိုတာက ကန်တုံအသံထွက်ကို Putonghua မှာသုံးတဲ့ တရုတ်စာလုံးတွေနဲ့ အသံတူတာကိုယူပြီး ပြောင်းရေးထားတာပါ။
ဥပမာအားဖြင့် ရှမ်းစာလုံး ' မ်ု,သူင်းခု ' ကို သူ့အသံထွက်အတိုင်း မြန်မာစာလုံးပေါင်းတွေနဲ့ ' မိုင်ဆွမ်ခ ' လို့ရေးသလိုမျိုးပေါ့။
ကန်တုံစကားကိုတော့ တရုတ်လို 粤语 Yuè yǔ သို့မဟုတ် 广东话 Guǎng dōng huà လို့ခေါ်ပါတယ်။
猴赛雷 ကို ကန်တုံတရုတ်စာလုံးနဲ့ရေးရင် 好犀利 လို့ရေးပါတယ်။
အဓိပ္ပာယ်ကတော့ 'အရမ်းတော်တယ်' 'အရမ်း အထာကျတယ်' 'အရမ်းလန်းတယ်' စသည်ဖြင့် တဖက်သားကို ချီးကျူးတဲ့အခါ၊ မြှောက်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
'မင်းတို့ အရမ်းလန်းတာပဲ' ဆိုတာကို ကန်တုံလိုရေးရင် -
Putonghua လိုရေးရင် -
ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က -
Nǐmen hǎo lìhài! လို့ပြောတာပါ။
☞ လေ့လာရန် ဗဟုသုတ ☜
粤语 Yuè yǔ ကို 白话 bái huà လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို စတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ 广东话 Guǎng dōng huà လို့ခေါ်ပါတယ်။ 粤语 Yuè yǔ ကို အဓိကသုံးတဲ့ဒေသတွေကတော့ 广东 Guǎng dōng ပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်း၊ 广西 Guǎng xī အရှေ့ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းအပြင်၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို စတဲ့ ဒေသတွေပါ။ အသုံးပြုတဲ့လူဦးရေက သန်း ၆၀ နဲ့ သန်း ၇၀ ကြားမှာရှိပါတယ်။
မြို့တော် 广州 Guǎng zhōu မှာပြောတဲ့စကားကတော့ လေယူလေသိမ်း အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ 广东 Guǎng dōng ပြည်နယ်သားအားလုံးကတော့ 粤语 Yuè yǔ ကို ပြောကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ 广东 Guǎng dōng က လူဦးရေ တဝက်လောက်ကပဲ 粤语 Yuè yǔ ကို ပြောပြီး၊ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ 客家话 Kè jiā huà အပြင်၊ 闽语 Mǐn yǔ အုပ်စုထဲမှာပါဝင်တဲ့ 潮州话 Cháo zhōu huà နဲ့ 雷州话 Léi zhōu huà စတဲ့ ဒေသန္တရစကားတွေကို ပြောကြပါတယ်။
粤语 Yuè yǔ ပြောသူတိုင်းကိုတော့ 广东 Guǎng dōng ပြည်နယ်သားလို့ အတတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ 广西 Guǎng xī မှာ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်က 汉族 Hàn zú ဟန်လူမျိုးတွေပါ။ အဲဒီထဲက တဝက်လောက်က 粤语 Yuè yǔ ကို ပြောကြပြီး၊ အဓိက အပြောများတဲ့ ဒေသတွေကတော့ 广西 Guǎng xī အရှေ့ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းဒေသတွေပေါ့။
粤语 Yuè yǔ ဟာ 广西 Guǎng xī ရဲ့ အဓိကဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ 广西 Guǎng xī နယ်သားတွေကတော့ 粤语 Yuè yǔ ကို 白话 Bái huà လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။
猴赛雷 hóu sāi léi ဆိုတာ ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။
တရုတျစကားပွောကွတဲ့အခါ တခြို့အသုံးအနှုနျးတှကေို တိုကျရိုကျဘာသာပွနျလို့မရပါဘူး။ စကားလုံးရဲ့ ရငျးမွဈတှကေို သိထားရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
ဒီစကားလုံးကို တဈလုံးခငျြးဘာသာပွနျရငျတော့ -
(n) 猴 hóu မြောကျ
(n) 赛 sāi ဗူးဆို့
(n) 雷 léi မိုးကွိုး။ မိုငျး
အမှနျတော့ 猴赛雷 hóu sāi léi ဆိုတာက ကနျတုံအသံထှကျကို Putonghua မှာသုံးတဲ့ တရုတျစာလုံးတှနေဲ့ အသံတူတာကိုယူပွီး ပွောငျးရေးထားတာပါ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ရှမျးစာလုံး ' မျု,သူငျးခု ' ကို သူ့အသံထှကျအတိုငျး မွနျမာစာလုံးပေါငျးတှနေဲ့ ' မိုငျဆှမျခ ' လို့ရေးသလိုမြိုးပေါ့။
ကနျတုံစကားကိုတော့ တရုတျလို 粤语 Yuè yǔ သို့မဟုတျ 广东话 Guǎng dōng huà လို့ချေါပါတယျ။
猴赛雷 ကို ကနျတုံတရုတျစာလုံးနဲ့ရေးရငျ 好犀利 လို့ရေးပါတယျ။
အဓိပ်ပာယျကတော့ 'အရမျးတျောတယျ' 'အရမျး အထာကတြယျ' 'အရမျးလနျးတယျ' စသညျဖွငျ့ တဖကျသားကို ခြီးကြူးတဲ့အခါ၊ မွှောကျပေးတဲ့အခါမြိုးမှာ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။
'မငျးတို့ အရမျးလနျးတာပဲ' ဆိုတာကို ကနျတုံလိုရေးရငျ -
Putonghua လိုရေးရငျ -
ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျက -
Nǐmen hǎo lìhài! လို့ပွောတာပါ။
☞ လလေ့ာရနျ ဗဟုသုတ ☜
粤语 Yuè yǔ ကို 白话 bái huà လို့လညျးချေါပါတယျ။ ဟောငျကောငျ၊ မကာအို စတဲ့ဒသေတှမှောတော့ 广东话 Guǎng dōng huà လို့ချေါပါတယျ။ 粤语 Yuè yǔ ကို အဓိကသုံးတဲ့ဒသေတှကေတော့ 广东 Guǎng dōng ပွညျနယျ အလယျပိုငျးနဲ့ အနောကျပိုငျး၊ 广西 Guǎng xī အရှပေို့ငျးနဲ့ တောငျပိုငျးအပွငျ၊ ဟောငျကောငျ၊ မကာအို စတဲ့ ဒသေတှပေါ။ အသုံးပွုတဲ့လူဦးရကေ သနျး ၆၀ နဲ့ သနျး ၇၀ ကွားမှာရှိပါတယျ။
မွို့တျော 广州 Guǎng zhōu မှာပွောတဲ့စကားကတော့ လယေူလသေိမျး အမှနျဖွဈပါတယျ။ 广东 Guǎng dōng ပွညျနယျသားအားလုံးကတော့ 粤语 Yuè yǔ ကို ပွောကွတာ မဟုတျပါဘူး။ 广东 Guǎng dōng က လူဦးရေ တဝကျလောကျကပဲ 粤语 Yuè yǔ ကို ပွောပွီး၊ ကနျြတဲ့သူတှကေတော့ 客家话 Kè jiā huà အပွငျ၊ 闽语 Mǐn yǔ အုပျစုထဲမှာပါဝငျတဲ့ 潮州话 Cháo zhōu huà နဲ့ 雷州话 Léi zhōu huà စတဲ့ ဒသေန်တရစကားတှကေို ပွောကွပါတယျ။
粤语 Yuè yǔ ပွောသူတိုငျးကိုတော့ 广东 Guǎng dōng ပွညျနယျသားလို့ အတတျမပွောနိုငျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ 广西 Guǎng xī မှာ သုံးပုံနှဈပုံလောကျက 汉族 Hàn zú ဟနျလူမြိုးတှပေါ။ အဲဒီထဲက တဝကျလောကျက 粤语 Yuè yǔ ကို ပွောကွပွီး၊ အဓိက အပွောမြားတဲ့ ဒသေတှကေတော့ 广西 Guǎng xī အရှပေို့ငျးနဲ့ တောငျပိုငျးဒသေတှပေေါ့။
粤语 Yuè yǔ ဟာ 广西 Guǎng xī ရဲ့ အဓိကဘာသာစကား တဈခုဖွဈပွီး၊ 广西 Guǎng xī နယျသားတှကေတော့ 粤语 Yuè yǔ ကို 白话 Bái huà လို့ပဲ ချေါပါတယျ။
ပိတောက်ပန်းကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
3:50 AM C-Knowledge , Chinese
ပိတောက်နဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတာ ခွဲခြားမရနိုင်သလို၊ ပိတောက်ပန်းဆိုတာကလည်း တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ နမ်းရှိုက်ခွင့်ရတဲ့ ပန်းတစ်မျိုးပါ။
(n) 紫檀花 zǐ tán huā ပိတောက်ပန်း
Miǎndiàn de guóhuā shì zǐtánhuā.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြုပန်းက ပိတောက်ပန်းပါပဲ။
Zǐtánhuā zhǐ kāi zài Miǎndiàn de xīnnián Pōshuǐjié.
ပိတောက်ပန်းဟာ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်မှာပဲ ပွင့်ပါတယ်။
Tā de tèdiǎn shì xīnnián qījiān xià le xīnnián yǔ hou cái kāi huā de.
သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ နှစ်သစ်အချိန်ကာလမှာ နှစ်သစ်မိုးရွာပြီးမှသာ ပန်းတွေပွင့်ကြတာပါပဲ။
Fǒuzé nǐ tiāntian jiāo shuǐ yě bú huì zhànfàng de, tā zhǐ děng xīnnián yǔ de dào lái.
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ သင်က နေ့တိုင်း ရေဖျန်းပေးရင်တောင် ပန်းတွေက ပွင့်လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူ(ပိတောက်တွေ)ကတော့ နှစ်သစ်မိုးလေး လာရောက်ပက်ဖျန်းမှာကို စောင့်နေမှာပဲလေ။
Suǒyǐ zài Miǎndiàn bǎ zǐtánhuā biāozhì zhe rén yǔ rén zhījiān de chéngnuò, yóuqí shì qínglǚ zhījiān.
ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိတောက်ပန်းကို လူတွေကြားမှာ ကတိသစ္စာရှိမှုကို ဖော်ညွှန်းတဲ့သင်္ကေတအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတယ်၊ အထူးသဖြင့်တော့ ချစ်သူရည်စားတွေကြားမှာပေါ့။
(စကားချပ် - တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆို ပိတောက် စသည်ဖြင့်)
Huāqī bù cháng. Zǎoshang kāi, dàngtiān xiàwǔ jiù luòdì le. Dàn tā de xiāngwèi hái liú zhe.
ပန်းပွင့်တဲ့ကာလက မကြာပါဘူး။ မနက်ပိုင်းမှာ ပွင့်ပြီး၊ အဲဒီနေ့ညနေပိုင်းပဲ ကြွေသွားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့မွှေးရနံ့ကတော့ ပျံ့နှံ့ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kāihuā qījiān shì měinián sìyuèfèn de zhōngxún.
ပန်းပွင့်ချိန်ကတော့ နှစ်စဉ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နဲ့ ၂၀ ရက်ကြားမှာပါ။
ပိတောကျပနျးကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
ပိတောကျနဲ့ သင်ျကွနျဆိုတာ ခှဲခွားမရနိုငျသလို၊ ပိတောကျပနျးဆိုတာကလညျး တဈနှဈမှာ တဈကွိမျသာ နမျးရှိုကျခှငျ့ရတဲ့ ပနျးတဈမြိုးပါ။
(n) 紫檀花 zǐ tán huā ပိတောကျပနျး
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံ့ကိုယျစားပွုပနျးက ပိတောကျပနျးပါပဲ။
ပိတောကျပနျးဟာ မွနျမာ့နှဈသဈကူး သင်ျကွနျမှာပဲ ပှငျ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ထူးခွားခကျြကတော့ နှဈသဈအခြိနျကာလမှာ နှဈသဈမိုးရှာပွီးမှသာ ပနျးတှပှေငျ့ကွတာပါပဲ။
ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ သငျက နတေို့ငျး ရဖေနျြးပေးရငျတောငျ ပနျးတှကေ ပှငျ့လာကွမှာမဟုတျပါဘူး၊ သူ(ပိတောကျတှေ)ကတော့ နှဈသဈမိုးလေး လာရောကျပကျဖနျြးမှာကို စောငျ့နမှောပဲလေ။
ဒါကွောငျ့မို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ပိတောကျပနျးကို လူတှကွေားမှာ ကတိသစ်စာရှိမှုကို ဖျောညှနျးတဲ့သင်ျကတေအဖွဈ သတျမှတျထားကွတယျ၊ အထူးသဖွငျ့တော့ ခဈြသူရညျစားတှကွေားမှာပေါ့။
(စကားခပျြ - တဈယောကျဆို တဈယောကျ၊ ပိတောကျဆို ပိတောကျ စသညျဖွငျ့)
ပနျးပှငျ့တဲ့ကာလက မကွာပါဘူး။ မနကျပိုငျးမှာ ပှငျ့ပွီး၊ အဲဒီနညေ့နပေိုငျးပဲ ကွှသှေားကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့မှေးရနံ့ကတော့ ပြံ့နှံ့ကနျြရဈခဲ့ပါတယျ။
ပနျးပှငျ့ခြိနျကတော့ နှဈစဉျ ဧပွီလ ၁၀ ရကျနဲ့ ၂၀ ရကျကွားမှာပါ။
ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
3:42 AM C-Word , Chinese
၂၁ ရာစုခေတ်ထဲမှာ လူငယ်တွေ တော်တော်များများက နည်းပညာပိုင်းတွေကို လေ့လာလိုက်စားလာကြပါတယ်။
ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်းကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပြဿနာကို ကြုံဖူးကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတချို့ကို တရုတ်လို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့နော်။
(n) 病毒 bìng dú
(v) 中毒 zhòng dú
(v) 杀毒 shā dú
(n) 杀毒软件 shā dú ruǎn jiàn
(n) 杀软 shā ruǎn
★ ကွန်ပျူတာမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ -
宏病毒 hóng bìng dú
引导型病毒 yǐn dǎo xíng bìng dú
Boot Strap Sector Virus
脚本病毒 jiǎo mù bìng dú
文件型病毒 wén jiàn xíng bìng dú
特洛伊木马 tè luò yī mù mǎ
★ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားအလိုက် ဒီလို ထပ်ခွဲထားပါတယ်။
Trojan အမျိုးအစားတွေကို 木马病毒 mù mǎ bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Win32, PE, Win95, W32, W95 အမျိုးအစားတွေကို 系统病毒 xì tǒng bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Worm အမျိုးအစားတွေကို 蠕虫病毒 rú chóng bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Scrip အမျိုးအစားတွေကို 脚本病毒 jiǎo mù bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Backdoor အမျိုးအစားတွေကို 后门病毒 hòu mén bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
ms office file တွေထဲကနေ ပျံ့နှံ့ပြီး 后门病毒 hòu mén bìng dú ရဲ့ မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကိုတော့ 宏病毒 hóng bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Harm အမျိုးအစားတွေကို 破坏性程序病毒 pò huài xìng chéng xù bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Joke အမျိုးအစားတွေကို 玩笑病毒 wán xiào bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
Binder အမျိုးအစားတွေကို 捆绑机病毒 kǔn bǎng jī bìng dú လို့ခေါ်ပါတယ်။
★ နာမည်ကျော် anti-virus software တွေကတော့ -
微软安全套件 wēi ruǎn ān quán tào jiàn
卡巴斯基 kǎ bā sī jī
小红伞 xiǎo hóng sǎn
比特梵德 bǐ tè fàn dé
趋势科技 qū shì kē jì
诺顿 - 赛门铁克 nuò dùn - sài mén tiě kè
တရုတ်ပြည်မှာ အသုံးများတဲ့ anti-virus software တွေကတော့ -
腾讯电脑管家 téng xùn diàn nǎo guǎn jiā
东方微点 dōng fāng wēi diǎn
百度杀毒 bǎi dù shā dú
金山毒霸 jīn shān dú bà
瑞星 ruì xīng
大蜘蛛 dà zhī zhū
迈克菲 mài kè fēi
江民 jiāng mín
ကှနျပြူတာ ဗိုငျးရပျဈကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
၂၁ ရာစုခတျေထဲမှာ လူငယျတှေ တျောတျောမြားမြားက နညျးပညာပိုငျးတှကေို လလေ့ာလိုကျစားလာကွပါတယျ။
ကှနျပြူတာသုံးသူတိုငျးကတော့ ဗိုငျးရပျဈပွဿနာကို ကွုံဖူးကွပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ နညျးပညာဆိုငျရာ ဝေါဟာရတခြို့ကို တရုတျလို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့နျော။
★ ကှနျပြူတာမှာ အမြားဆုံးတှရေ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှကေတော့ -
★ ဗိုငျးရပျဈအမြိုးအစားအလိုကျ ဒီလို ထပျခှဲထားပါတယျ။
Trojan အမြိုးအစားတှကေို 木马病毒 mù mǎ bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Win32, PE, Win95, W32, W95 အမြိုးအစားတှကေို 系统病毒 xì tǒng bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Worm အမြိုးအစားတှကေို 蠕虫病毒 rú chóng bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Scrip အမြိုးအစားတှကေို 脚本病毒 jiǎo mù bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Backdoor အမြိုးအစားတှကေို 后门病毒 hòu mén bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
ms office file တှထေဲကနေ ပြံ့နှံ့ပွီး 后门病毒 hòu mén bìng dú ရဲ့ မြိုးကှဲဗိုငျးရပျဈတဈမြိုးကိုတော့ 宏病毒 hóng bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Harm အမြိုးအစားတှကေို 破坏性程序病毒 pò huài xìng chéng xù bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Joke အမြိုးအစားတှကေို 玩笑病毒 wán xiào bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
Binder အမြိုးအစားတှကေို 捆绑机病毒 kǔn bǎng jī bìng dú လို့ချေါပါတယျ။
★ နာမညျကြျော anti-virus software တှကေတော့ -
တရုတျပွညျမှာ အသုံးမြားတဲ့ anti-virus software တှကေတော့ -
早上 zǎoshang နဲ့ 上午 shàngwǔ ဘာကွာလဲ။
3:33 AM C-Word , Chinese
ဒီဝေါဟာရနှစ်ခုက ထူးထူးခြားခြား ကွာခြားမှုမရှိတဲ့အတွက် အဆင်ပြေသလို သုံးလို့ရပါတယ်။
(n) 早上 zǎo shang မနက်
(n) 上午 shàng wǔ မနက်
မနက်ပိုင်းကို ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အခြားဝေါဟာရတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
(n) 早晨 zǎo chén မနက်
(n) 晨 chén မနက်
(n) 朝 zhāo မနက်
(n) 晓 xiǎo မနက်
တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ တနေ့တာ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ပုံတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
凌晨 líng chén ဝေလီဝေလင်း
清晨 qīng chén မနက်စောစော
早上 / 上午 zǎo shang / shàng wǔ မနက်
中午 zhōng wǔ နေ့လည်
下午 xià wǔ ညနေ
晚上 wǎn shang ညပိုင်း
မနက်ပိုင်း အခေါ်အဝေါ်တွေရဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံတွေက -
နေမထွက်သေးတဲ့အချိန်ကို '凌晨 líng chén ဝေလီဝေလင်း' လို့ခေါ်ပါတယ်။
နေထွက်လာကာစ အချိန်ထိကို '清晨 qīng chén မနက်စောစော' လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ရှစ်နာရီကနေ ဆယ့်နှစ်နာရီထိကို '早上 / 上午 zǎo shang / shàng wǔ မနက်' လို့ခေါ်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်းဆိုတာ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အစပျိုးတဲ့အချိန်ပါ။ မနက်ပိုင်းမှာ ရောင်းတဲ့သတင်းစာကို '晨报 chén bào' သို့မဟုတ် '早报 zǎo bào' သို့မဟုတ် '日报 rì bào' လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် စကားလုံးကတော့ ညနေခင်းသတင်းစာ '晚报 wǎn bào' ပေါ့။
မနက်ပိုင်း စားကြတဲ့ အစားအစာကို '早餐 zǎo cān မနက်စာ' လို့ခေါ်ပြီး၊ ညနေပိုင်း စားကြတဲ့ အစားအစာကို '晚餐 wǎn cān ညစာ' လို့ခေါ်ပါတယ်။
早上 zǎoshang နဲ့ 上午 shàngwǔ ဘာကှာလဲ။
ဒီဝေါဟာရနှဈခုက ထူးထူးခွားခွား ကှာခွားမှုမရှိတဲ့အတှကျ အဆငျပွသေလို သုံးလို့ရပါတယျ။
(n) 早上 zǎo shang မနကျ
(n) 上午 shàng wǔ မနကျ
မနကျပိုငျးကို ချေါဝျေါတဲ့ အခွားဝေါဟာရတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။
(n) 早晨 zǎo chén မနကျ
(n) 晨 chén မနကျ
(n) 朝 zhāo မနကျ
(n) 晓 xiǎo မနကျ
တရုတျလူမြိုးတှရေဲ့ တနတေ့ာ အခြိနျကာလ သတျမှတျပုံတှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။
凌晨 líng chén ဝလေီဝလေငျး
清晨 qīng chén မနကျစောစော
早上 / 上午 zǎo shang / shàng wǔ မနကျ
中午 zhōng wǔ နလေ့ညျ
下午 xià wǔ ညနေ
晚上 wǎn shang ညပိုငျး
မနကျပိုငျး အချေါအဝျေါတှရေဲ့ ခှဲခွားသတျမှတျပုံတှကေ -
နမေထှကျသေးတဲ့အခြိနျကို '凌晨 líng chén ဝလေီဝလေငျး' လို့ချေါပါတယျ။
နထှေကျလာကာစ အခြိနျထိကို '清晨 qīng chén မနကျစောစော' လို့ ချေါပါတယျ။
ရှဈနာရီကနေ ဆယျ့နှဈနာရီထိကို '早上 / 上午 zǎo shang / shàng wǔ မနကျ' လို့ချေါပါတယျ။
မနကျပိုငျးဆိုတာ နတေ့ဈနရေဲ့ အစပြိုးတဲ့အခြိနျပါ။ မနကျပိုငျးမှာ ရောငျးတဲ့သတငျးစာကို '晨报 chén bào' သို့မဟုတျ '早报 zǎo bào' သို့မဟုတျ '日报 rì bào' လို့ချေါပါတယျ။ အဲဒါရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ စကားလုံးကတော့ ညနခေငျးသတငျးစာ '晚报 wǎn bào' ပေါ့။
မနကျပိုငျး စားကွတဲ့ အစားအစာကို '早餐 zǎo cān မနကျစာ' လို့ချေါပွီး၊ ညနပေိုငျး စားကွတဲ့ အစားအစာကို '晚餐 wǎn cān ညစာ' လို့ချေါပါတယျ။
了 le ကို ဘယ်လိုမျိုး ကြိယာတွေမှာ မဖြစ်မနေတွဲရလဲ။
3:28 AM C-Grammar , Chinese
တရုတ်စကားပြောတဲ့အခါ တချို့ကြိယာတွေနောက်မှာ 了 le မထည့်ပဲ သုံးလို့မရတာကို သင်သတိထားမိပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကြိယာအမျိုးအစားနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
တရုတ်ဘာသာမှာ တချို့ကြိယာတွေဟာ အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ ဖြစ်ပြီးကြာင်းကို ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အဲဒီလိုကြိယာတွေကို အသုံးပြုပြီး ပြောကြားမယ်ဆိုရင် တဖက်သား 'နားထောင်သူဖက်' က ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အခုပြောနေချိန်မတိုင်ခင်ကတည်းက ဖြစ်ပျက်နေခဲ့တယ်လို့ လက်ခံယူဆနိုင်တဲ့ ကြိယာမျိုးတွေပါ။
အဲဒီကြိယာတွေကို အတိတ်ကာလပြကြိယာတွေ လို့ခေါ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အဓိကထူးခြားချက်က သူ့တစ်လုံးတည်း ရပ်တည်လို့မရဘဲ နောက်ဆက်ပစ္စည်း 了 le ကို သူတို့နောက်မှာ ကပ်လျက်တွဲသုံးပေးရပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ အတိတ်ကာလပြကြိယာတွေကတော့ -
(v) 病 bìng
(v) 丢 diū
(v) 忘记 wàngjì
(v) 死 sǐ
(v) 疯 fēng
★ S + V + 了 le ( အဟုတ်ပုံစံ )
Tā bìng le.
ဒီလိုမျိုး ကြိယာတွေကို အငြင်းပုံစံ သုံးတဲ့အခါလည်း သတိထားရပါတယ်။ အငြင်းပုံစံမှာ အငြင်းကြိယာဝိသေသန '不 bù' ကို သုံးလို့မရပါဘူး။ V ရဲ့ရှေ့မှာ အငြင်းကြိယာဝိသေသန '没 méi' နဲ့ ငြင်းပြီး၊ နောက်ဆက်ပစ္စည်း '了 le' ကို ပြန်ဖြုတ်ပေးရပါတယ်။
★ S + 没 méi + V ( အငြင်းပုံစံ )
Tā méi bìng.
★ အမှန်ပုံစံနဲ့ အမှားပုံစံများ။
你疯吗？( X )
Nǐ fēng ma?
你疯了吗？( √ )
Nǐ fēng le ma?
我不疯。( X )
Wǒ bù fēng.
我没疯。( √ )
Wǒ méi fēng.
了 le ကို ဘယျလိုမြိုး ကွိယာတှမှော မဖွဈမနတှေဲရလဲ။
တရုတျစကားပွောတဲ့အခါ တခြို့ကွိယာတှနေောကျမှာ 了 le မထညျ့ပဲ သုံးလို့မရတာကို သငျသတိထားမိပါသလား။
ဟုတျပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ကွိယာအမြိုးအစားနဲ့ သကျဆိုငျပါတယျ။
တရုတျဘာသာမှာ တခြို့ကွိယာတှဟော အနကျအဓိပ်ပာယျအရ ဖွဈပွီးကွာငျးကို ဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ။ ဆိုလိုတာကတော့ အဲဒီလိုကွိယာတှကေို အသုံးပွုပွီး ပွောကွားမယျဆိုရငျ တဖကျသား 'နားထောငျသူဖကျ' က ဒီအဖွဈအပကျြဟာ အခုပွောနခြေိနျမတိုငျခငျကတညျးက ဖွဈပကျြနခေဲ့တယျလို့ လကျခံယူဆနိုငျတဲ့ ကွိယာမြိုးတှပေါ။
အဲဒီကွိယာတှကေို အတိတျကာလပွကွိယာတှေ လို့ချေါပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ အဓိကထူးခွားခကျြက သူ့တဈလုံးတညျး ရပျတညျလို့မရဘဲ နောကျဆကျပစ်စညျး 了 le ကို သူတို့နောကျမှာ ကပျလကျြတှဲသုံးပေးရပါတယျ။
အသုံးမြားတဲ့ အတိတျကာလပွကွိယာတှကေတော့ -
★ S + V + 了 le ( အဟုတျပုံစံ )
ဒီလိုမြိုး ကွိယာတှကေို အငွငျးပုံစံ သုံးတဲ့အခါလညျး သတိထားရပါတယျ။ အငွငျးပုံစံမှာ အငွငျးကွိယာဝိသသေန '不 bù' ကို သုံးလို့မရပါဘူး။ V ရဲ့ရှမှေ့ာ အငွငျးကွိယာဝိသသေန '没 méi' နဲ့ ငွငျးပွီး၊ နောကျဆကျပစ်စညျး '了 le' ကို ပွနျဖွုတျပေးရပါတယျ။
★ S + 没 méi + V ( အငွငျးပုံစံ )
★ အမှနျပုံစံနဲ့ အမှားပုံစံမြား။
ကီးဘုတ်ပေါ်က # hash ကို တရုတ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။
3:23 AM C-Word , Chinese
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းကီးဘုတ်တွေပေါ်မှာ hash လို့ခေါ်တဲ့ သင်္ကေတ # ကို အားလုံးတွေ့ဖူးကြမှာပါ။
အဲဒီသင်္ကေတလေးက တရုတ်စာလုံးတွေထဲက 井 နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူပါတယ်။
井 ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က 'ရေတွင်း' ဖြစ်ပြီး၊ အသံထွက်က jǐng လို့ ထွက်ပါတယ်။
နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာတော့ အခေါ်အဝေါ်အသစ်တွေ၊ သင်္ကေတအသစ်တွေ အများကြီးပေါ်လာသလို၊ # hash သင်္ကေတလေးကိုလည်း တရုတ်တွေက 井 jǐng လို့ခေါ်ပါတယ်။
☞ ဆက်စပ်လေ့လာရန် သင်္ကေတများ ☜
/ 正斜杠 zhèng xié gàng
\_ 反斜杠 fǎn xié gàng
® 注册商标 zhù cè shāng biāo
© 版权标记 bǎn quán biāo jì
@ 艾特 ài tè
~ 波浪线 bō làng xiàn
波浪纹 bō làng wén
ကီးဘုတျပျေါက # hash ကို တရုတျလိုဘယျလိုချေါလဲ။
ကှနျပြူတာကီးဘုတျ ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးကီးဘုတျတှပေျေါမှာ hash လို့ချေါတဲ့ သင်ျကတေ # ကို အားလုံးတှဖေူ့းကွမှာပါ။
အဲဒီသင်ျကတေလေးက တရုတျစာလုံးတှထေဲက 井 နဲ့ အနီးစပျဆုံးတူပါတယျ။
井 ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျက 'ရတှေငျး' ဖွဈပွီး၊ အသံထှကျက jǐng လို့ ထှကျပါတယျ။
နညျးပညာခတျေကွီးမှာတော့ အချေါအဝျေါအသဈတှေ၊ သင်ျကတေအသဈတှေ အမြားကွီးပျေါလာသလို၊ # hash သင်ျကတေလေးကိုလညျး တရုတျတှကေ 井 jǐng လို့ချေါပါတယျ။
☞ ဆကျစပျလလေ့ာရနျ သင်ျကတေမြား ☜
我们 wǒ men နဲ့ 咱们 zán men ဘာကွာလဲ။
2:54 AM C-Word , Chinese
တရုတ်ဘာသာမှာ 'ငါတို့။ ကျွန်တော်တို့။ ကျွန်မတို့' လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ 我们 wǒ men နဲ့ 咱们 zán men နာမ်စားနှစ်ခုကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
(pro) 我们 wǒ men ငါတို့
(pro) 咱们 zán men ငါတို့
我们 wǒ men က စာပေပုံစံဆန်ပါတယ်။ 咱们 zán men က စကားပြောပုံစံဆန်ပြီး၊ ပိုမိုရင်းနှီးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ မိမိနဲ့ နည်းနည်းပဲ ရင်းနှီးတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမရင်းနှီးတဲ့ သူတွေနဲ့ စကားပြောကြတဲ့အခါ 我们 wǒ men လို့ သုံးလေ့ရှိပြီး၊ မိမိနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေ ဥပမာအားဖြင့် မိသားစုဝင်တွေ၊ ချစ်သူရည်းစားတွေနဲ့ စကားပြောကြတဲ့အခါမှာ 咱们 zán men လို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
'普通话 Pǔ tōng huà ဖူထုံးဟွာ့' မှာတော့ ပြောသူသာပါဝင်ပြီး နားထောင်သူ မပါဝင်ရင် 我们 wǒ men ကို သုံးပြီး၊ ပြောသူရော နားထောင်သူပါ အပါအဝင်လို့ ရည်ညွှန်းချင်ရင် 咱们 zán men ကို သုံးပါတယ်။
ဥပမာ ( ၁ )
Xiǎo Wáng, wǒmen qù yóuyǒng.
ရှောင်ဝမ်ရေ၊ ငါတို့ ငါတို့ ရေသွားကူးကြမယ်။
★ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားတဲ့အတွက် ရေသွားကူးမယ့်အထဲမှာ Xiao Wang မပါပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ တခြားသူတွေက ရေသွားကူးမှာ၊ မင်းက အိမ်စောင့်နေခဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဥပမာ ( ၂ )
Xiǎo Wáng, zánmen qù yóuyǒng.
★ 咱们 zán men လို့ သုံးထားတဲ့အတွက် ရေသွားကူးမယ့်အထဲမှာ Xiao Wang လည်း ပါပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ မင်းနဲ့ ရေသွားကူးရအောင် ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာ 我们 wǒ men ကို သုံးထားတိုင်း နားထောင်သူ မပါဝင်ဘူးလို့ အတိအကျ မယူဆနိုင်ပါဘူး။
Zánmen qù wán.
★ 咱们 zán men လို့ သုံးထားတဲ့အတွက် သင်ပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မင်းလည်း ငါတို့နဲ့အတူလိုက်ဆော့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
Wǒmen qù wán, nǐ liú xià kān jiā.
ငါတို့ သွားဆော့ကြမယ်။ မင်းက အိမ်စောင့်ကျန်ခဲ့။
★ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားတဲ့အတွက် သင် မပါဝင်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ တခြားသူတွေက သွားဆော့ကြမယ်၊ မင်းက ကျန်နေခဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဥပမာ ( ၃ )
Wǒmen qù wán, ràng dìdi kān jiā.
ငါတို့ သွားဆော့ကြမယ်၊ ညီလေးကို အိမ်စောင့်ခိုင်းထားလိုက်။
★ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားပေမယ့်လည်း၊ သင်ပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မင်းလည်း ငါတို့နဲ့ အတူလိုက်ဆော့၊ ညီလေးကိုတော့ အိမ်မှာထားခဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
我们 wǒ men နဲ့ 咱们 zán men ကို ပြောင်းသုံးလို့ရပါသလားဆိုတာ ဆက်ရှင်းပြပါ့မယ်။
Wǒ lái jièshào yíxià, zhè wèi shì wǒmen jīnglǐ.
ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က ကျွန်တော်တို့ မန်နေဂျာပါ။
ဒီဝါကျထဲမှာ 我们 wǒ men ကို 咱们 zán men လို့ ပြောင်းသုံးလို့မရပါဘူး။ 咱们 zán men ကို သုံးလိုက်ရင် နားထောင်နေတဲ့သူပါ အပါအဝင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီဝါကျမှာ မန်နေဂျာက ပြောသူဘက်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ နားထောင်သူဘက်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
Wáng jīnglǐ zhēn shì zánmen de qīn xiōngdì.
မန်နေဂျာဝမ်က ငါတို့ရဲ့ ညီရင်းအစ်ကိုလိုပါပဲ။
ဒီဝါကျထဲမှာ 咱们 zán men လို့ သုံးထားတာက ပြောသူရော၊ နားထောင်သူ နှစ်ဖက်လုံးကို ရည်ညွှန်းထားတာပါ။ တကယ်လို့ မိမိရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူ ရှိနေချိန်မှာ ပြောကြားမယ်ဆိုရင် 我们 wǒ men ကို ပြောင်းသုံးလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလို သုံးမိသွားရင် သူတို့က တစ်ဖက်၊ မိမိတို့က တစ်ဖက်ဆိုပြီး ဘက်ခွဲထားတဲ့ သဘောမျိုးသက်ရောက်သွားပြီး အထင်လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
Wǒmen zuò wǎnfàn ba!
ဒီဝါကျထဲမှာ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားတာက ပြောသူရော၊ နားထောင်သူကိုပါ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ 咱们 zán men လို့ ပြောင်းသုံးလည်း ရပါတယ်။
အဲဒီဥပမာတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရင် 我们 wǒ men ဆိုတာက ပြောသူတစ်ဖက်တည်းကို ရည်ညွှန်းနိုင်သလို၊ နားထောင်သူပါ ပါဝင်တယ်လို့လည်း ရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။ 咱们 zán men ကတော့ ပြောသူရော၊ နားထောင်သူရော နှစ်ဘက်လုံးပါဝင်တယ်လို့ပဲ ရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။
★ အသုံးအနှုန်း သတိပြုရန် ★
ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ 方言 fāng yán လို့ခေါ်တဲ့ ဒေသိယအသုံးတွေကိုတော့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တချို့ဒေသတွေ အထူးသဖြင့် 辽宁 Liáo níng ပြည်နယ်သားတွေကတော့ စကားပြောတိုင်းမှာ 'ငါတို့' ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို 咱们 zán men လို့ပဲ ပြောကြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင်နဲ့ ရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး မဟုတ်သလို၊ သင်ပါ အပါအဝင်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလည်း မရည်ညွှန်းပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဒေသအသုံးဖြစ်နေလို့ 咱们 zán men လို့ပဲ သုံးကြတာပါ။
我们 wǒ men နဲ့ 咱们 zán men ဘာကှာလဲ။
တရုတျဘာသာမှာ 'ငါတို့။ ကြှနျတျောတို့။ ကြှနျမတို့' လို့ ပွောတဲ့အခါမှာ 我们 wǒ men နဲ့ 咱们 zán men နာမျစားနှဈခုကို သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
(pro) 我们 wǒ men ငါတို့
(pro) 咱们 zán men ငါတို့
我们 wǒ men က စာပပေုံစံဆနျပါတယျ။ 咱们 zán men က စကားပွောပုံစံဆနျပွီး၊ ပိုမိုရငျးနှီးတဲ့ အဓိပ်ပာယျမြိုး ပါဝငျပါတယျ။
ဆိုလိုတာကတော့ မိမိနဲ့ နညျးနညျးပဲ ရငျးနှီးတဲ့သူ ဒါမှမဟုတျ လုံးဝမရငျးနှီးတဲ့ သူတှနေဲ့ စကားပွောကွတဲ့အခါ 我们 wǒ men လို့ သုံးလရှေိ့ပွီး၊ မိမိနဲ့ ရငျးနှီးသူတှေ ဥပမာအားဖွငျ့ မိသားစုဝငျတှေ၊ ခဈြသူရညျးစားတှနေဲ့ စကားပွောကွတဲ့အခါမှာ 咱们 zán men လို့ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။
'普通话 Pǔ tōng huà ဖူထုံးဟှာ့' မှာတော့ ပွောသူသာပါဝငျပွီး နားထောငျသူ မပါဝငျရငျ 我们 wǒ men ကို သုံးပွီး၊ ပွောသူရော နားထောငျသူပါ အပါအဝငျလို့ ရညျညှနျးခငျြရငျ 咱们 zán men ကို သုံးပါတယျ။
ရှောငျဝမျရေ၊ ငါတို့ ငါတို့ ရသှေားကူးကွမယျ။
★ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားတဲ့အတှကျ ရသှေားကူးမယျ့အထဲမှာ Xiao Wang မပါပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ တခွားသူတှကေ ရသှေားကူးမှာ၊ မငျးက အိမျစောငျ့နခေဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
★ 咱们 zán men လို့ သုံးထားတဲ့အတှကျ ရသှေားကူးမယျ့အထဲမှာ Xiao Wang လညျး ပါပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ မငျးနဲ့ ရသှေားကူးရအောငျ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဒါပမေယျ့ တခါတလမှော 我们 wǒ men ကို သုံးထားတိုငျး နားထောငျသူ မပါဝငျဘူးလို့ အတိအကြ မယူဆနိုငျပါဘူး။
★ 咱们 zán men လို့ သုံးထားတဲ့အတှကျ သငျပါ ပါဝငျပါတယျ။ ဆိုလိုတာက မငျးလညျး ငါတို့နဲ့အတူလိုကျဆော့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ငါတို့ သှားဆော့ကွမယျ။ မငျးက အိမျစောငျ့ကနျြခဲ့။
★ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားတဲ့အတှကျ သငျ မပါဝငျပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ငါနဲ့ တခွားသူတှကေ သှားဆော့ကွမယျ၊ မငျးက ကနျြနခေဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ငါတို့ သှားဆော့ကွမယျ၊ ညီလေးကို အိမျစောငျ့ခိုငျးထားလိုကျ။
★ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားပမေယျ့လညျး၊ သငျပါ ပါဝငျပါတယျ။ ဆိုလိုတာကတော့ မငျးလညျး ငါတို့နဲ့ အတူလိုကျဆော့၊ ညီလေးကိုတော့ အိမျမှာထားခဲ့ ဆိုတဲ့သဘောပါ။
我们 wǒ men နဲ့ 咱们 zán men ကို ပွောငျးသုံးလို့ရပါသလားဆိုတာ ဆကျရှငျးပွပါ့မယျ။
ကြှနျတျော မိတျဆကျပေးပါရစေ၊ ဒီပုဂ်ဂိုလျက ကြှနျတျောတို့ မနျနဂြောပါ။
ဒီဝါကထြဲမှာ 我们 wǒ men ကို 咱们 zán men လို့ ပွောငျးသုံးလို့မရပါဘူး။ 咱们 zán men ကို သုံးလိုကျရငျ နားထောငျနတေဲ့သူပါ အပါအဝငျလို့ အဓိပ်ပာယျရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒီဝါကမြှာ မနျနဂြောက ပွောသူဘကျနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ။ နားထောငျသူဘကျနဲ့ မဆိုငျပါဘူး။
မနျနဂြောဝမျက ငါတို့ရဲ့ ညီရငျးအဈကိုလိုပါပဲ။
ဒီဝါကထြဲမှာ 咱们 zán men လို့ သုံးထားတာက ပွောသူရော၊ နားထောငျသူ နှဈဖကျလုံးကို ရညျညှနျးထားတာပါ။ တကယျလို့ မိမိရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့အတူ ရှိနခြေိနျမှာ ပွောကွားမယျဆိုရငျ 我们 wǒ men ကို ပွောငျးသုံးလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလို သုံးမိသှားရငျ သူတို့က တဈဖကျ၊ မိမိတို့က တဈဖကျဆိုပွီး ဘကျခှဲထားတဲ့ သဘောမြိုးသကျရောကျသှားပွီး အထငျလှဲသှားနိုငျပါတယျ။
ဒီဝါကထြဲမှာ 我们 wǒ men လို့ သုံးထားတာက ပွောသူရော၊ နားထောငျသူကိုပါ ရညျညှနျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ 咱们 zán men လို့ ပွောငျးသုံးလညျး ရပါတယျ။
အဲဒီဥပမာတှကေို လလေ့ာကွညျ့လိုကျရငျ 我们 wǒ men ဆိုတာက ပွောသူတဈဖကျတညျးကို ရညျညှနျးနိုငျသလို၊ နားထောငျသူပါ ပါဝငျတယျလို့လညျး ရညျညှနျးနိုငျပါတယျ။ 咱们 zán men ကတော့ ပွောသူရော၊ နားထောငျသူရော နှဈဘကျလုံးပါဝငျတယျလို့ပဲ ရညျညှနျးနိုငျပါတယျ။
★ အသုံးအနှုနျး သတိပွုရနျ ★
ဒါပမေယျ့ တခါတရံမှာ 方言 fāng yán လို့ချေါတဲ့ ဒသေိယအသုံးတှကေိုတော့ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံရဲ့ တခြို့ဒသေတှေ အထူးသဖွငျ့ 辽宁 Liáo níng ပွညျနယျသားတှကေတော့ စကားပွောတိုငျးမှာ 'ငါတို့' ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျကို 咱们 zán men လို့ပဲ ပွောကွလရှေိ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သငျနဲ့ ရငျးနှီးတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျမြိုး မဟုတျသလို၊ သငျပါ အပါအဝငျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျမြိုးကိုလညျး မရညျညှနျးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဒသေအသုံးဖွဈနလေို့ 咱们 zán men လို့ပဲ သုံးကွတာပါ။
တရုတ်ဂဏန်းတွေထဲမှာ ဖတ်ရခက်တဲ့ သုည။
6:55 PM C-Word , Chinese
သုညကို တရုတ်လို 零 líng လို့ခေါ်ပါတယ်။ တရုတ်ကိန်းဂဏန်းတွေထဲမှာ သုညပါနေရင် ဖတ်ရခက်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းသုံးမျိုးကို သိထားရင် သုညပါဝင်နေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ဖတ်ရလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။
★ နည်းလမ်း ( ၁ )
ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ အဆုံးမှာ သုညပါနေရင် သုညရှေ့က ကိန်းပြည့်ရဲ့ ယူနစ်ကို ထည့်မဖတ်လည်းရပါတယ်။ ထည့်ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
三百五 သို့မဟုတ် 三百五十
sān bǎi wǔ သို့မဟုတ် sān bǎi wǔ shí
( 五 wǔ နောက်က 十 shí ကို ထည့်မဖတ်လည်းရပါတယ် )
三千五 သို့မဟုတ် 三千五百
sān qiān wǔ သို့မဟုတ် sān qiān wǔ bǎi
( 五 wǔ နောက်က 百 bǎi ကို ထည့်မဖတ်လည်းရပါတယ် )
三万五 သို့မဟုတ် 三万五千
sān wàn wǔ သို့မဟုတ် sān wàn wǔ qiān
( 五 wǔ နောက်က 千 qiān ကို ထည့်မဖတ်လည်းရပါတယ် )
★ နည်းလမ်း ( ၂ )
ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ အလယ်မှာ သုညပါနေရင် သုညရဲ့ အသံထွက် 零 líng ကို ထည့်ဖတ်ရပါတယ်။ သုည ဘယ်နှစ်လုံးပါပါ တစ်ကြိမ်သာ ဖတ်ပေးရပါတယ်။
sān bǎi líng wǔ
sān qiān líng wǔ
sān wàn líng wǔ
★ နည်းလမ်း ( ၃ )
ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ အလယ်ရော၊ နောက်ဆုံးမှာပါ သုညပါနေရင် သုညရဲ့ အသံထွက် 零 líng ကို ထည့်ဖတ်ရမယ့်အပြင် နောက်ဆုံးက သုညရှေ့မှာရှိတဲ့ ကိန်းပြည့်ယူနစ်ကိုပါ ထည့်ဖတ်ရပါမယ်။
sān qiān líng wǔ shí
sān wàn líng wǔ bǎi
sān wàn líng wǔ shí
အောက်ပါ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ဆက်စပ်လေ့လာကြည့်ပါ။
yí yì líng wǔ qiān líng qī
sān qiān yì líng èr
sì yì líng qī shí wàn líng bā shí
liù shí bā yì líng wǔ wàn jiǔ qiān
jiǔ qiān bā bǎi sān shí yì
shí yì líng wǔ bǎi wàn líng liù bǎi líng yī
တရုတျဂဏနျးတှထေဲမှာ ဖတျရခကျတဲ့ သုည။
သုညကို တရုတျလို 零 líng လို့ချေါပါတယျ။ တရုတျကိနျးဂဏနျးတှထေဲမှာ သုညပါနရေငျ ဖတျရခကျပါတယျ။
ဒီနညျးလမျးသုံးမြိုးကို သိထားရငျ သုညပါဝငျနတေဲ့ ကိနျးဂဏနျးတှကေို ဖတျရလှယျကူပါလိမျ့မယျ။
★ နညျးလမျး ( ၁ )
ကိနျးဂဏနျးတှရေဲ့ အဆုံးမှာ သုညပါနရေငျ သုညရှကေ့ ကိနျးပွညျ့ရဲ့ ယူနဈကို ထညျ့မဖတျလညျးရပါတယျ။ ထညျ့ဖတျလိုက ဖတျနိုငျပါတယျ။
三百五 သို့မဟုတျ 三百五十
sān bǎi wǔ သို့မဟုတျ sān bǎi wǔ shí
( 五 wǔ နောကျက 十 shí ကို ထညျ့မဖတျလညျးရပါတယျ )
三千五 သို့မဟုတျ 三千五百
sān qiān wǔ သို့မဟုတျ sān qiān wǔ bǎi
( 五 wǔ နောကျက 百 bǎi ကို ထညျ့မဖတျလညျးရပါတယျ )
三万五 သို့မဟုတျ 三万五千
sān wàn wǔ သို့မဟုတျ sān wàn wǔ qiān
( 五 wǔ နောကျက 千 qiān ကို ထညျ့မဖတျလညျးရပါတယျ )
★ နညျးလမျး ( ၂ )
ကိနျးဂဏနျးတှရေဲ့ အလယျမှာ သုညပါနရေငျ သုညရဲ့ အသံထှကျ 零 líng ကို ထညျ့ဖတျရပါတယျ။ သုည ဘယျနှဈလုံးပါပါ တဈကွိမျသာ ဖတျပေးရပါတယျ။
★ နညျးလမျး ( ၃ )
ကိနျးဂဏနျးတှရေဲ့ အလယျရော၊ နောကျဆုံးမှာပါ သုညပါနရေငျ သုညရဲ့ အသံထှကျ 零 líng ကို ထညျ့ဖတျရမယျ့အပွငျ နောကျဆုံးက သုညရှမှေ့ာရှိတဲ့ ကိနျးပွညျ့ယူနဈကိုပါ ထညျ့ဖတျရပါမယျ။
အောကျပါ ကိနျးဂဏနျးတှကေို ဆကျစပျလလေ့ာကွညျ့ပါ။
男 nán နဲ့ 女 nǚ က ဘယ်လိုထူးခြားနေတာလဲ။
5:33 PM C-Grammar , Chinese
တရုတ်သဒ္ဒါကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာကြည့်ရင် သဒ္ဒါပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးခြားမှုလေးတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ တရုတ်အဘိဓာန်စာအုပ် ဒါမှမဟုတ် အွန်လိုင်းအဘိဓာန်တွေထဲမှာ 男 nán နဲ့ 女 nǚ စကားလုံးတွေကို သင်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် စကားလုံးအမျိုးအစားကို ' Noun နာမ် ' အဖြစ် ညွှန်ပြထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(n) 男 nán ယောင်္ကျားလေး
(n) 女 nǚ မိန်းကလေး
ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားလုံးနှစ်ခုကို ဝါကျထဲမှာ ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင် နာမ်တစ်ခုအဖြစ် လုံးဝသုံးခွင့်မရှိပါဘူး။
ဒါဆိုရင် နာမ်အဖြစ်သုံးတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
တရုတ်ဘာသာမှာရှိတဲ့ နာမ်အားလုံးဟာ ကတ္တား သို့မဟုတ် ကံပုဒ်နေရာမှာ သူ့တစ်လုံးတည်း ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။
နာမ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ' 书 shū စာအုပ် ' ကို ကံပုဒ်အဖြစ်သုံးရင် -
Shū shì wǒde.
ဒါပေမယ့် 男 nán နဲ့ 女 nǚ ကို ကတ္တား သို့မဟုတ် ကံပုဒ်နေရာမှာ သူ့တစ်လုံးတည်း သုံးလို့မရပါဘူး။
ကံပုဒ်အဖြစ်သုံးတဲ့အခါ ဒီလိုသုံးရင် မှားပါတယ်။
Tā shì nán.
Tā shì nǚ.
Nán bú zài, nǚ zài.
ယောင်္ကျားလေး မရှိဘူး၊ မိန်းကလေး ရှိတယ်။
ဒါဆိုရင် 男 nán နဲ့ 女 nǚ ကို ကတ္တား သို့မဟုတ် ကံပုဒ်နေရာမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
ပထမဦးစွာ ' 的 de Ph - de စကားစု ' အရင် ပြုလုပ်ရပါမယ်။
Adj မှ N ပြောင်းပုံကို လေ့လာရန် https://goo.gl/Wzgj4A ကို နှိပ်ပါ။
' 的 de စကားစု ' ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာက Adj တွေရဲ့နောက်မှာ 的 de ပေါင်းထည့်ပြီး နာမ်အဖြစ် ပြောင်းပေးရတာပါ။
' 大 dà ကြီးသော ' ဆိုတဲ့ Adj ကို ' အကြီး ' ဆိုတဲ့ နာမ်အနေနဲ့ သုံးချင်ရင် ' 大的 dà de အကြီး ' ဆိုပြီး ပြောင်းပေးရတာပါ။
男 nán နဲ့ 女 nǚ ကိုလည်း 的 de ပေါင်းထည့်မှသာ ကတ္တား သို့မဟုတ် ကံပုဒ်အဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။
男的 nán de ယောင်္ကျားလေး
女的 nǚ de မိန်းကလေး
Tā shì nán de.
Tā shì nǚ de.
Nán de bú zài, nǚ de zài.
နောက်ထပ် ထူးခြားမှုတစ်ခုက 男 nán နဲ့ 女 nǚ ဟာ တခြားနာမ်တစ်ခုရဲ့ရှေ့ကနေ တစ်သံထွက် Adj သဘောမျိုး အထူးပြုနိုင်ခြင်းပါပဲ။
男学生 nán xué sheng ကျောင်းသား
女学生 nǚ xué sheng ကျောင်းသူ
ဒီပုံစံမှာ 学生 xué sheng ဆိုတဲ့ နာမ်ရဲ့ရှေ့ကနေ 男 nán နဲ့ 女 nǚ ကို နာမဝိသေသနသဘောမျိုးနဲ့ အထူးပြုထားတာပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် 男 nán နဲ့ 女 nǚ ဟာ နာမ်တစ်ခု ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း၊ နာမ်တစ်ခုပုံစံမျိုး အသုံးပြုလို့မရဘဲ၊ နာမဝိသေသနပုံစံမျိုးသာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် သဒ္ဒါသဘောအရ ' 形容词性名词 xíng róng cí xìng míng cí နာမဝိသေသနသဘောပါတဲ့ နာမ် ' အဖြစ်သာ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
男 nán နဲ့ 女 nǚ က ဘယျလိုထူးခွားနတောလဲ။
တရုတျသဒ်ဒါကို ထဲထဲဝငျဝငျ လလေ့ာကွညျ့ရငျ သဒ်ဒါပိုငျးဆိုငျရာ ထူးခွားမှုလေးတှကေို တှနေို့ငျပါတယျ။
အကယျ၍ တရုတျအဘိဓာနျစာအုပျ ဒါမှမဟုတျ အှနျလိုငျးအဘိဓာနျတှထေဲမှာ 男 nán နဲ့ 女 nǚ စကားလုံးတှကေို သငျလလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ စကားလုံးအမြိုးအစားကို ' Noun နာမျ ' အဖွဈ ညှနျပွထားတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
(n) 男 nán ယောကငြ်္ားလေး
(n) 女 nǚ မိနျးကလေး
ဒါပမေယျ့ အဲဒီစကားလုံးနှဈခုကို ဝါကထြဲမှာ ထညျ့သုံးမယျဆိုရငျ နာမျတဈခုအဖွဈ လုံးဝသုံးခှငျ့မရှိပါဘူး။
ဒါဆိုရငျ နာမျအဖွဈသုံးတယျဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
တရုတျဘာသာမှာရှိတဲ့ နာမျအားလုံးဟာ ကတ်တား သို့မဟုတျ ကံပုဒျနရောမှာ သူ့တဈလုံးတညျး ရပျတညျနိုငျပါတယျ။
နာမျတဈခုဖွဈတဲ့ ' 书 shū စာအုပျ ' ကို ကံပုဒျအဖွဈသုံးရငျ -
ဒါပမေယျ့ 男 nán နဲ့ 女 nǚ ကို ကတ်တား သို့မဟုတျ ကံပုဒျနရောမှာ သူ့တဈလုံးတညျး သုံးလို့မရပါဘူး။
ကံပုဒျအဖွဈသုံးတဲ့အခါ ဒီလိုသုံးရငျ မှားပါတယျ။
ယောကငြ်္ားလေး မရှိဘူး၊ မိနျးကလေး ရှိတယျ။
ဒါဆိုရငျ 男 nán နဲ့ 女 nǚ ကို ကတ်တား သို့မဟုတျ ကံပုဒျနရောမှာ ဘယျလိုသုံးရမလဲ။
ပထမဦးစှာ ' 的 de Ph - de စကားစု ' အရငျ ပွုလုပျရပါမယျ။
Adj မှ N ပွောငျးပုံကို လလေ့ာရနျ https://goo.gl/Wzgj4A ကို နှိပျပါ။
' 的 de စကားစု ' ပွုလုပျတယျဆိုတာက Adj တှရေဲ့နောကျမှာ 的 de ပေါငျးထညျ့ပွီး နာမျအဖွဈ ပွောငျးပေးရတာပါ။
' 大 dà ကွီးသော ' ဆိုတဲ့ Adj ကို ' အကွီး ' ဆိုတဲ့ နာမျအနနေဲ့ သုံးခငျြရငျ ' 大的 dà de အကွီး ' ဆိုပွီး ပွောငျးပေးရတာပါ။
男 nán နဲ့ 女 nǚ ကိုလညျး 的 de ပေါငျးထညျ့မှသာ ကတ်တား သို့မဟုတျ ကံပုဒျအဖွဈ သုံးလို့ရပါတယျ။
男的 nán de ယောကငြ်္ားလေး
女的 nǚ de မိနျးကလေး
နောကျထပျ ထူးခွားမှုတဈခုက 男 nán နဲ့ 女 nǚ ဟာ တခွားနာမျတဈခုရဲ့ရှကေ့နေ တဈသံထှကျ Adj သဘောမြိုး အထူးပွုနိုငျခွငျးပါပဲ။
男学生 nán xué sheng ကြောငျးသား
女学生 nǚ xué sheng ကြောငျးသူ
ဒီပုံစံမှာ 学生 xué sheng ဆိုတဲ့ နာမျရဲ့ရှကေ့နေ 男 nán နဲ့ 女 nǚ ကို နာမဝိသသေနသဘောမြိုးနဲ့ အထူးပွုထားတာပါ။
အခြုပျအားဖွငျ့ပွောရရငျ 男 nán နဲ့ 女 nǚ ဟာ နာမျတဈခု ဖွဈနပေမေယျ့လညျး၊ နာမျတဈခုပုံစံမြိုး အသုံးပွုလို့မရဘဲ၊ နာမဝိသသေနပုံစံမြိုးသာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့အတှကျ သဒ်ဒါသဘောအရ ' 形容词性名词 xíng róng cí xìng míng cí နာမဝိသသေနသဘောပါတဲ့ နာမျ ' အဖွဈသာ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
တရုတ်ဝါကျတွေမှာ Subject နှစ်ခု သုံးလို့ရပါသလား။
5:26 PM C-Grammar , Chinese
တရုတ်သဒ္ဒါရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် နာမဝိသေသနကို ဝါစကအဖြစ်သုံးထားတဲ့ ဝါကျတွေမှာ ကတ္တားနှစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲဒီကတ္တားနှစ်ခုကို အဓိကကတ္တားနဲ့ အရံကတ္တားလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဓိကကတ္တားက ဝါကျတစ်ကြောင်းလုံးရဲ့ ကတ္တားဖြစ်ပြီး၊ အရံကတ္တားက အဓိကကတ္တားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကတ္တားကို တရုတ်လို 大主语 dà zhǔ yǔ လို့ခေါ်ပြီး၊ အရံကတ္တားကိုတော့ 小主语 xiǎo zhǔ yǔ လို့ခေါ်ပါတယ်။
★ အဓိကကတ္တား + အရံကတ္တား + Adj-P
Tā tóufa cháng.
သူမ ဆံပင် ရှည်တယ်။
ဒီဝါကျထဲမှာ ' 她 tā သူမ ' က အဓိကကတ္တားဖြစ်ပြီး၊ ' 头发 tóufa ဆံပင် ' က အရံကတ္တားဖြစ်ပါတယ်။ ' 长 cháng ရှည်လျားသော ' က နာမဝိသေသနဖြစ်ပြီး ဝါကျရဲ့ ဝါစကအဖြစ် သုံးထားပါတယ်။
Chǎnpǐn zhìliàng hǎo.
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းက အရည်အသွေး ကောင်းတယ်။
Jīntiān tiānqì búcuò.
ဒီနေ့ ရာသီဥတု မဆိုးဘူး။
ဒီလိုဝါကျတွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကတ္တားနှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပါပဲ။
အဓိကကတ္တားကို နာမဝိသေသနပုဒ်စုအဖြစ်သုံးပြီး၊ အရံကတ္တားကို အထူးပြုတဲ့အခါ၊ တနည်းအားဖြင့် အလွယ်မှတ်ရင်တော့ အဓိကကတ္တားနဲ့ အရံကတ္တားကြားမှာ နောက်ဆက်ပစ္စည်း ' 的 de ' ကို ထည့်လိုက်ရင် ကတ္တားနှစ်ခုကနေ ကတ္တားတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ် လုံးဝမပြောင်းလဲပါ။
Tā de tóufa cháng.
ဒီဝါကျထဲမှာ ' 她的头发 tā de tóufa သူမရဲ့ ဆံပင် ' က ကတ္တားဖြစ်ပါတယ်။ ' 长 cháng ရှည်လျားသော ' က နာမဝိသေသနဖြစ်ပြီး ဝါကျရဲ့ ဝါစကအဖြစ် သုံးထားပါတယ်။
Chǎnpǐn de zhìliàng hǎo.
Jīntiān de tiānqì búcuò.
တရုတျဝါကတြှမှော Subject နှဈခု သုံးလို့ရပါသလား။
တရုတျသဒ်ဒါရှုထောငျ့ကကွညျ့မယျဆိုရငျ နာမဝိသသေနကို ဝါစကအဖွဈသုံးထားတဲ့ ဝါကတြှမှော ကတ်တားနှဈခုရှိပါတယျ။
အဲဒီကတ်တားနှဈခုကို အဓိကကတ်တားနဲ့ အရံကတ်တားလို့ ချေါပါတယျ။ အဓိကကတ်တားက ဝါကတြဈကွောငျးလုံးရဲ့ ကတ်တားဖွဈပွီး၊ အရံကတ်တားက အဓိကကတ်တားရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
အဓိကကတ်တားကို တရုတျလို 大主语 dà zhǔ yǔ လို့ချေါပွီး၊ အရံကတ်တားကိုတော့ 小主语 xiǎo zhǔ yǔ လို့ချေါပါတယျ။
★ အဓိကကတ်တား + အရံကတ်တား + Adj-P
သူမ ဆံပငျ ရှညျတယျ။
ဒီဝါကထြဲမှာ ' 她 tā သူမ ' က အဓိကကတ်တားဖွဈပွီး၊ ' 头发 tóufa ဆံပငျ ' က အရံကတ်တားဖွဈပါတယျ။ ' 长 cháng ရှညျလြားသော ' က နာမဝိသသေနဖွဈပွီး ဝါကရြဲ့ ဝါစကအဖွဈ သုံးထားပါတယျ။
ထုတျကုနျပစ်စညျးက အရညျအသှေး ကောငျးတယျ။
ဒီနေ့ ရာသီဥတု မဆိုးဘူး။
ဒီလိုဝါကတြှရေဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ကတ်တားနှဈခုကို တဈခုတညျးဖွဈအောငျ ပွုလုပျနိုငျခွငျးပါပဲ။
အဓိကကတ်တားကို နာမဝိသသေနပုဒျစုအဖွဈသုံးပွီး၊ အရံကတ်တားကို အထူးပွုတဲ့အခါ၊ တနညျးအားဖွငျ့ အလှယျမှတျရငျတော့ အဓိကကတ်တားနဲ့ အရံကတ်တားကွားမှာ နောကျဆကျပစ်စညျး ' 的 de ' ကို ထညျ့လိုကျရငျ ကတ်တားနှဈခုကနေ ကတ်တားတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ အဓိပ်ပာယျ လုံးဝမပွောငျးလဲပါ။
ဒီဝါကထြဲမှာ ' 她的头发 tā de tóufa သူမရဲ့ ဆံပငျ ' က ကတ်တားဖွဈပါတယျ။ ' 长 cháng ရှညျလြားသော ' က နာမဝိသသေနဖွဈပွီး ဝါကရြဲ့ ဝါစကအဖွဈ သုံးထားပါတယျ။
Screenshot ရိုက်တာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
5:22 PM C-Word , Chinese
ဖုန်းတွေကိုယ်စီသုံးပြီး အွန်လိုင်းကနေ အပြန်အလှန် စာပို့နေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒါတွေလည်း သိထားဖို့လိုပါတယ်။
(v) 截屏 jié píng
(n) 截图 jié tú
Zhíjiē fā wénzì fā bù chū lái, jiēpíng chéng tú hòu zài fā.
စာတွေကို တိုက်ရိုက်ပို့လို့မရရင်၊ screenshot ရိုက်ပြီး ထပ်ပို့ကြည့်လိုက်ပါ။
Screenshot ရိုကျတာကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ဖုနျးတှကေိုယျစီသုံးပွီး အှနျလိုငျးကနေ အပွနျအလှနျ စာပို့နကွေတဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ ဒါတှလေညျး သိထားဖို့လိုပါတယျ။
စာတှကေို တိုကျရိုကျပို့လို့မရရငျ၊ screenshot ရိုကျပွီး ထပျပို့ကွညျ့လိုကျပါ။
ဖုန်း - ဟန်းဖုန်း - ဟန်းဆက် - မိုဘိုင်းဖုန်း - စမတ်ဖုန်း - ဖုနျး - ဟနျးဖုနျး - ဟနျးဆကျ - မိုဘိုငျးဖုနျး - စမတျဖုနျး - phone - Phone - PHONE - Telephone - shou3ji1 - shouji - shǒu jī - dianhua - dian4hua4 - diàn huà - 手机 - 手機 - 电话 - 電話
copy ကူးတာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
5:19 PM C-Word , Chinese
ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အခါ copy ကူးတာ၊ paste လုပ်တာတွေကို တရုတ်လိုပြောတတ်အောင် မှတ်သားထားပါနော်။
(v) 复制 fù zhì
(v) 拷贝 kǎo bèi
Zài diànnǎo shang yòng Ctrl+C jiù néng kǎobèi huòzhě zhíjiē xuǎnzhòng yòng shǔbiāo yòujiàn xuǎn fùzhì jiù kěyǐ le.
ကွန်ပျူတာမှာ Ctrl+C ကို သုံးရင် ကော်ပီကူးလို့ရပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တိုက်ရိုက် select ပေး၊ mouse ညာဘက်ကို click နှိပ်ပြီး ရွေးကူးလို့လည်း ရပါတယ်။
☞ လေ့လာထားသင့်သော ဝေါဟာရများ ☜
(v) 选中 xuǎn zhòng
(n) 鼠标 shǔ biāo
(n) 右键 yòu jiàn
(n) 硬盘拷贝 yìng pán kǎo bèi
hard disk မှ copy ကူးခြင်း
(v) 粘贴 zhān tiē
(ph) 复制粘贴 fù zhì nián tiē
copy and paste လုပ်သည်
zhān tiē dào wén dàng zhōng
file ထဲသို့ paste လုပ်သည်
(n) 文档 wén dàng
(n)版权 bǎn quán
copyright - မူပိုင်ခွင့်
copy ကူးတာကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
ကှနျပြူတာသုံးတဲ့အခါ copy ကူးတာ၊ paste လုပျတာတှကေို တရုတျလိုပွောတတျအောငျ မှတျသားထားပါနျော။
ကှနျပြူတာမှာ Ctrl+C ကို သုံးရငျ ကျောပီကူးလို့ရပါတယျ၊ ဒါမှမဟုတျ တိုကျရိုကျ select ပေး၊ mouse ညာဘကျကို click နှိပျပွီး ရှေးကူးလို့လညျး ရပါတယျ။
☞ လလေ့ာထားသငျ့သော ဝေါဟာရမြား ☜
hard disk မှ copy ကူးခွငျး
copy and paste လုပျသညျ
file ထဲသို့ paste လုပျသညျ
copyright - မူပိုငျခှငျ့
2:21 AM C-Video , Chinese
တရုတ်စကား စတင်လေ့လာနေသူများအတွက် အသံထွက် လွဲမှားမှု မရှိစေရန် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တရုတျစကား စတငျလလေ့ာနသေူမြားအတှကျ အသံထှကျ လှဲမှားမှု မရှိစရေနျ ဗီဒီယိုသငျခနျးစာဖွငျ့ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
ကိုရီးယားက EXO အဖွဲ့ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
5:53 PM C-Knowledge , Chinese
EXO အဖွဲ့က ကိုရီးယားမှာသာမက၊ တကမ္ဘာလုံးမှာပါ နာမည်အရမ်းကြီးပြီး၊ fan များစွာ ရှိပါတယ်။
EXO ကို တရုတ်လို 爱咳嗽 ài ké sou လို့ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးသုံးလုံးရဲ့ အသံထွက် "အက်ခ်ဇို" ကို အသံဖလှယ်ထားတာပါ။
叉蛋 chā dàn လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ XO စာလုံးပုံစံကို ခေါ်တာပါ။ X စာလုံးက ကြက်ခြေခတ်နဲ့တူလို့ 叉 chā လို့ခေါ်ပြီး၊ O စာလုံးက ဥပုံစံအလုံးလေးမို့ 蛋 dàn လို့ခေါ်တာပါ။ အဲဒီတော့ XO စာလုံးပုံစံက ကြက်ခြေခတ်တစ်ခုနဲ့ ဥတစ်လုံးဆိုတော့ 叉蛋 chā dàn လို့ ခေါ်တာပေါ့။
EXO အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ နာမည်တွေကို တရုတ်လို ဒီလိုရေးပါတယ်။
1. KRIS 크리스
吴亦凡 Wú yì fán
2. XIU MIN 김민석
金珉硕 Jīn mín shuò
3. LU HAN 루한
鹿晗 Lù hán
4. LAY 레이
张艺兴 Zhāng yì xīng
5. CHEN 김종대
金钟大 Jīn zhōng dà
6. TAO 타오
黄子韬 Huáng zǐ tāo
7. SU HO 김준면 (Kim Jun Myun)
金俊绵 Jīn jùn mián
8. BAEK HYUN 변백현 (Baek Hyun)
边伯贤 biān bó xián
9. CHAN YEOL 박찬열 (Park Chan Yeol)
朴灿烈 Pō càn liè
10. D.O. 도경수 (Do Kyung Soo)
都暻秀 Dōu Jǐng xiù
11. KAI 김종인 (Kim Jong In)
金钟仁 Jīn zhōng rén
12. SE HUN 오세훈 (Oh Se Hun)
吴世勋 Wú shì xūn
EXO shì Hánguó SM yúlè yǒuxiàn gōngsī yú 2012 nián4yuè 8 rì zhèngshì tuīchū de 12 rén nánzi liúxíng yǎnchàng tuántǐ.
EXO ဆိုတာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ SM Enterainment ကုမ္ပဏီလိမိတက်က ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၈ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ရေပန်းစားတဲ့ တေးဂီတဖျော်ဖြေမှုအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
EXO zhège míngzì cóng yì wéi tàiyángxì yǐwài de wàibù xíngxīng yīcí zhōng délái, yùnhán le tāmen shì cóng wèizhī de shìjiè lái de xīnxīng zhī yì.
EXO ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ နေစကြဝဠာအပြင်ဘက်က ပြင်ပဂြိုဟ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ EXO PLANET ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ယူထားတာပါ၊ သူတို့ဟာ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ကမ္ဘာကနေလာတဲ့ ဂြိုဟ်သစ် (nova) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါ။
Érqiě shí èr wèi chéngyuán zhōng yǒu sìwèi dōu shì Zhōngguórén, qíyú de chéngyuán rìcháng shēnghuó zhōng yě zài xuéxí Zhōngwén, suǒyǐ huì shuō Zhōngwén.
နောက်ပြီးတော့ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ယောက်ထဲမှာ လေးယောက်က တရုတ်လူမျိုးတွေပါ၊ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ တရုတ်စကားကို လေ့လာနေကြပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့က တရုတ်စကား ပြောတတ်ကြပါတယ်။
Kěxī Huáng Zǐtāo, Lù hán, Wú Yìfán líkāi le zhè ge tuánduì.
နှမြောစရာတစ်ခုက Huang Zitao, Luhan, Wu Yifan တို့က ဒီအဖွဲ့ထဲကနေ ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုရီးယားက EXO အဖှဲ့ကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
EXO အဖှဲ့က ကိုရီးယားမှာသာမက၊ တကမ်ဘာလုံးမှာပါ နာမညျအရမျးကွီးပွီး၊ fan မြားစှာ ရှိပါတယျ။
EXO ကို တရုတျလို 爱咳嗽 ài ké sou လို့ချေါပါတယျ။ အင်ျဂလိပျစာလုံးသုံးလုံးရဲ့ အသံထှကျ "အကျချဇို" ကို အသံဖလှယျထားတာပါ။
叉蛋 chā dàn လို့လညျး ချေါပါတယျ။ ဒါကတော့ XO စာလုံးပုံစံကို ချေါတာပါ။ X စာလုံးက ကွကျခွခေတျနဲ့တူလို့ 叉 chā လို့ချေါပွီး၊ O စာလုံးက ဥပုံစံအလုံးလေးမို့ 蛋 dàn လို့ချေါတာပါ။ အဲဒီတော့ XO စာလုံးပုံစံက ကွကျခွခေတျတဈခုနဲ့ ဥတဈလုံးဆိုတော့ 叉蛋 chā dàn လို့ ချေါတာပေါ့။
EXO အဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ နာမညျတှကေို တရုတျလို ဒီလိုရေးပါတယျ။
EXO ဆိုတာ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ SM Enterainment ကုမ်ပဏီလိမိတကျက ၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ ဧပွီလ၊ ၈ ရကျနမှေ့ာ တရားဝငျတညျထောငျဖှဲ့စညျးလိုကျပွီး ရပေနျးစားတဲ့ တေးဂီတဖြျောဖွမှေုအဖှဲ့တဈခု ဖွဈပါတယျ။
EXO ဆိုတဲ့ နာမညျဟာ နစေကွဝဠာအပွငျဘကျက ပွငျပဂွိုဟျတဈခုဖွဈတဲ့ EXO PLANET ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ယူထားတာပါ၊ သူတို့ဟာ အမြိုးအမညျမသိတဲ့ ကမ်ဘာကနလောတဲ့ ဂွိုဟျသဈ (nova) ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျမြိုးပါ။
နောကျပွီးတော့ အဖှဲ့ဝငျ ၁၂ ယောကျထဲမှာ လေးယောကျက တရုတျလူမြိုးတှပေါ၊ ကနျြတဲ့အဖှဲ့ဝငျတှကေတော့ ပုံမှနျလုပျဆောငျမှုတဈခုအနနေဲ့ တရုတျစကားကို လလေ့ာနကွေပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့မို့ သူတို့က တရုတျစကား ပွောတတျကွပါတယျ။
နှမွောစရာတဈခုက Huang Zitao, Luhan, Wu Yifan တို့က ဒီအဖှဲ့ထဲကနေ ထှကျသှားခဲ့ကွပါတယျ။
傻逼 shǎ bī ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးသင့်လား။
4:11 AM C-Idiom , Chinese
သင်ဟာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လူယဉ်ကျေးအသိုင်းအဝိုင်းက မွေးဖွားလာသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ လုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 傻逼 shǎ bī ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက သူတပါးကို ဆဲဆိုရာမှာသုံးတဲ့ မိုက်ရိုင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ကောင် လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပေမယ့်၊ တကယ့်အဓိပ္ပာယ်က ဒီထက်ပိုပြီး မိုက်ရိုင်းပါတယ်။
ဒီအသုံးအနှုန်းကို တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ပေကျင်းမြို့မှာ အသုံးများပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ရေပန်းစားလာတဲ့ အွန်လိုင်းအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီစကားလုံးကို လူကြားထဲမှာ သင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကို မိုက်ရိုင်းတဲ့ အောက်တန်းစားတစ်ယောက်အဖြစ် အထင်အမြင်သေးစွာ ကြည့်ရှုခံရလိမ့်မယ်။
ဒီဝေါဟာရက စာနဲ့ရေးသားတဲ့အခါ 傻B သို့မဟုတ် SB လို့လည်း ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ နောက်ပြီး 逼 bī ဆိုတဲ့ အသံထွက်က 屄 bī နဲ့လည်း အသံထွက်တူနေပါတယ်။ 屄 bī ဆိုတာက ဒဲ့ဘာသာပြန်ရရင် မိန်းကလေးတွေရဲ့ေ-ာက် -ုတ် ကို ပြောတာပါ။ ဒီစကားလုံးဟာ ပေကျင်းသားတွေ ဆဲတဲ့အခါ အသုံးများတာမို့ တရုတ်မီဒီယာတွေက 北骂 běi mà လို့တောင် ဖော်ပြကြတယ်။ ပေကျင်းသားတွေက ဒီစကားလုံးသုံးပြီး တဖက်သားကို ဆဲတဲ့အခါ 丫 yā ဆိုတဲ့စာလုံးလေးနဲ့တွဲပြီး "你丫傻B！Nǐ yā shǎbī!" လို့ ဆဲလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီစကားလုံးကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ သင် မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်သားကို ဆဲသင့်မဆဲသင့်ကတော့ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
Rúguǒ nǐ shuō biérén shì shǎbī, nàme nǐ yě yídìng shì shǎbī.
တကယ်လို့ သင်က တဖက်သားကိုေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ကောင်လို့ ပြောလိုက်ရင်၊ သင်လည်း သေချာပေါက်ေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ကောင် ဖြစ်သွားမှာပါ။
Dāng nǐmen shuō biérén shǎbī de shíhou, qīshí yě bāohán le zìjǐ.
သင်တို့က သူတပါးကိုေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ကောင် လို့ ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ တကယ်တော့ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီအထဲမှာ ပါသွားပါပြီ။
Yīnwèi wǒmen dōu bèi zhèzhǒng "shǎbī wénhuà" tǒnghuà le.
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဒီလိုမျိုးေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရလို့ပါပဲ။
傻逼 shǎ bī ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သုံးသငျ့လား။
သငျဟာ အဆငျ့အတနျးရှိတဲ့ လူယဉျကြေးအသိုငျးအဝိုငျးက မှေးဖှားလာသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ လုံးဝမသုံးသငျ့ပါဘူး။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ 傻逼 shǎ bī ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက သူတပါးကို ဆဲဆိုရာမှာသုံးတဲ့ မိုကျရိုငျးတဲ့အသုံးအနှုနျးတဈခု ဖွဈနလေို့ပါ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ေ-ာကျသုံးမကတြဲ့ကောငျလို့ ဘာသာပွနျနိုငျပမေယျ့၊ တကယျ့အဓိပ်ပာယျက ဒီထကျပိုပွီး မိုကျရိုငျးပါတယျ။
ဒီအသုံးအနှုနျးကို တရုတျပွညျမွောကျပိုငျး၊ အထူးသဖွငျ့ ပကေငျြးမွို့မှာ အသုံးမြားပါတယျ။ အခုခတျေမှာ ရပေနျးစားလာတဲ့ အှနျလိုငျးအသုံးအနှုနျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ ဒီစကားလုံးကို လူကွားထဲမှာ သငျပွောလိုကျမယျဆိုရငျ သငျ့ကို မိုကျရိုငျးတဲ့ အောကျတနျးစားတဈယောကျအဖွဈ အထငျအမွငျသေးစှာ ကွညျ့ရှုခံရလိမျ့မယျ။
ဒီဝေါဟာရက စာနဲ့ရေးသားတဲ့အခါ 傻B သို့မဟုတျ SB လို့လညျး ရေးလရှေိ့ကွပါတယျ။ နောကျပွီး 逼 bī ဆိုတဲ့ အသံထှကျက 屄 bī နဲ့လညျး အသံထှကျတူနပေါတယျ။ 屄 bī ဆိုတာက ဒဲ့ဘာသာပွနျရရငျ မိနျးကလေးတှရေဲ့ေ-ာကျ -ုတျ ကို ပွောတာပါ။ ဒီစကားလုံးဟာ ပကေငျြးသားတှေ ဆဲတဲ့အခါ အသုံးမြားတာမို့ တရုတျမီဒီယာတှကေ 北骂 běi mà လို့တောငျ ဖျောပွကွတယျ။ ပကေငျြးသားတှကေ ဒီစကားလုံးသုံးပွီး တဖကျသားကို ဆဲတဲ့အခါ 丫 yā ဆိုတဲ့စာလုံးလေးနဲ့တှဲပွီး "你丫傻B！Nǐ yā shǎbī!" လို့ ဆဲလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီစကားလုံးကို ဗဟုသုတအနနေဲ့ သငျ မှတျထားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဖကျသားကို ဆဲသငျ့မဆဲသငျ့ကတော့ ကိုယျ့အဆငျ့အတနျးနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ သငျက တဖကျသားကိုေ-ာကျသုံးမကတြဲ့ကောငျ လို့ပွောလိုကျရငျ၊ သငျလညျး သခြောပေါကျေ-ာကျသုံးမကတြဲ့ကောငျ ဖွဈသှားမှာပါ။
သငျတို့က သူတပါးကိုေ-ာကျသုံးမကတြဲ့ကောငျ လို့ ပွောလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ၊ တကယျတော့ သငျကိုယျတိုငျလညျး အဲဒီအထဲမှာ ပါသှားပါပွီ။
ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ ဒီလိုမြိုးေ-ာကျသုံးမကတြဲ့ ယဉျကြေးမှုတှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ခံနရေလို့ပါပဲ။
ခြင်ထောင်ထောင်တာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
4:05 AM C-Word , Chinese
ခြင်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ခြင်ထောင်ထောင်တာပါပဲ။
(v) 挂 guà
(n) 蚊帐 wén zhàng
(v.o) 挂蚊帐 guà wén zhàng
Méi wénzi shí bù yí guà wénzhàng.
ခြင်မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ခြင်ထောင်မထောင်သင့်ဘူး။
☞ လေ့လာရန် ဝေါဟာရများ ☜
(n) 帐子 zhàng zi
(n) 幔帐 màn zhàng
(n) 打坐纱帐 dǎ zuò shā zhàng
(ph) 一顶蚊帐 yì dǐng wén zhàng
(v.o) 拉蚊帐 lā wén zhàng
(v.o) 挂帐子 guà zhàng zi
(v.o) 扯蚊帐 chě wén zhàng
(v.o) 撑蚊帐 chēng wén zhàng
ခွငျထောငျထောငျတာကို တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ခွငျအန်တရာယျကို ကာကှယျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက ခွငျထောငျထောငျတာပါပဲ။
ခွငျမရှိတဲ့ အခြိနျမှာ ခွငျထောငျမထောငျသငျ့ဘူး။
☞ လလေ့ာရနျ ဝေါဟာရမြား ☜
တရုတ်သဒ္ဒါမှာ V နဲ့ Adj ဘယ်လိုခွဲခြားထားသလဲ။
5:54 PM C-Grammar , Chinese
တရုတ်ဘာသာမှာရှိတဲ့ V နဲ့ Adj အားလုံးကို အသံအားဖြင့် ခွဲခြားရင် တစ်သံ သို့မဟုတ် နှစ်သံသာလျှင် ရှိကြပါတယ်။
V ကို တရုတ်လို 动词 dòng cí လို့ခေါ်ပြီး၊ Adj ကို 形容词 xíng róng cí လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဝေါဟာရတစ်ခုမှာ တစ်သံထွက်ကို တရုတ်လို 单音节 dān yīn jié လို့ခေါ်ပြီး၊ နှစ်သံထွက်ကို 双音节 shuāng yīn jié လို့ခေါ်ပါတယ်။
☞ V နဲ့ Adj နဲ့ အဓိက ကွာခြားချက် ☜
★ V တွေဟာ
၁) Obj ကံပုဒ် တွဲဆက်နိုင်ပါတယ်။
၂) ဒီဂရီပြ ကြိယာဝိသေသနနဲ့ အထူးမပြုနိုင်ပါ။
V + O ( √ )
Adv. Degree + V ( × )
★ Adj တွေဟာ
၁) Obj ကံပုဒ် မတွဲဆက်နိုင်ပါ။
၂) ဒီဂရီပြ ကြိယာဝိသေသနနဲ့ အထူးပြုနိုင်ပါတယ်။
Adj + O ( × )
Adv. Degree + Adj ( √ )
★ ဒါဆိုရင် 喜欢 xǐhuan က V လား၊ Adj လား။
ကံပုဒ်တွဲဆက်နိုင်တဲ့အတွက် ဖော်ပြပါဝါကျမှာ V လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဂရီပြ ကြိယာဝိသေသနနဲ့ အထူးပြုနိုင်တဲ့အတွက် ဖော်ပြပါဝါကျမှာ နာမဝိသေသနလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
hěn xǐhuan yǎnsè
အရောင်ကို အရမ်း ကြိုက်တယ်။
ကံပုဒ်ရော ဒီဂရီပြ ကြိယာဝိသေသနပါ တပြိုင်တည်း သုံးနိုင်တဲ့အတွက် ဖော်ပြပါဝါကျမှာ Adj သဘောပါတဲ့ V 形容词性动词 xíngróngcí xìng dòngcí အဖြစ်သုံးထားတာပါ။
တရုတျသဒ်ဒါမှာ V နဲ့ Adj ဘယျလိုခှဲခွားထားသလဲ။
တရုတျဘာသာမှာရှိတဲ့ V နဲ့ Adj အားလုံးကို အသံအားဖွငျ့ ခှဲခွားရငျ တဈသံ သို့မဟုတျ နှဈသံသာလြှငျ ရှိကွပါတယျ။
V ကို တရုတျလို 动词 dòng cí လို့ချေါပွီး၊ Adj ကို 形容词 xíng róng cí လို့ချေါပါတယျ။
ဝေါဟာရတဈခုမှာ တဈသံထှကျကို တရုတျလို 单音节 dān yīn jié လို့ချေါပွီး၊ နှဈသံထှကျကို 双音节 shuāng yīn jié လို့ချေါပါတယျ။
☞ V နဲ့ Adj နဲ့ အဓိက ကှာခွားခကျြ ☜
★ V တှဟော
၁) Obj ကံပုဒျ တှဲဆကျနိုငျပါတယျ။
၂) ဒီဂရီပွ ကွိယာဝိသသေနနဲ့ အထူးမပွုနိုငျပါ။
★ Adj တှဟော
၁) Obj ကံပုဒျ မတှဲဆကျနိုငျပါ။
၂) ဒီဂရီပွ ကွိယာဝိသသေနနဲ့ အထူးပွုနိုငျပါတယျ။
★ ဒါဆိုရငျ 喜欢 xǐhuan က V လား၊ Adj လား။
ကံပုဒျတှဲဆကျနိုငျတဲ့အတှကျ ဖျောပွပါဝါကမြှာ V လို့ မှတျယူနိုငျပါတယျ။
ဒီဂရီပွ ကွိယာဝိသသေနနဲ့ အထူးပွုနိုငျတဲ့အတှကျ ဖျောပွပါဝါကမြှာ နာမဝိသသေနလို့ မှတျယူနိုငျပါတယျ။
အရောငျကို အရမျး ကွိုကျတယျ။
ကံပုဒျရော ဒီဂရီပွ ကွိယာဝိသသေနပါ တပွိုငျတညျး သုံးနိုငျတဲ့အတှကျ ဖျောပွပါဝါကမြှာ Adj သဘောပါတဲ့ V 形容词性动词 xíngróngcí xìng dòngcí အဖွဈသုံးထားတာပါ။
အိမ်သာသွားတာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
得 ကို ဘယ်လို အသံထွက်မလဲ။
အစားရှောင်တာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောရလဲ။
在 zài ကို တရုတ်ဝါကျတွေမှာ ဘယ်လိုသုံးလဲ။
没 钱 méi qián မှာ ဘာလို့ 有 yǒu မပါတာလဲ။
来 lái ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဒီလိုသုံးကြတယ်။
想 xiǎng ကို ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ သုံးနိုင်သလဲ။
一 yī 、二 èr 、三 sān ကို တခြားအသံထွက်နဲ့ ပြောင်းဖတ်လိ...
ဘုရားပွဲကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
မင်းလုပ်စာ ထိုင်စားနေတာ မဟုတ်ဘူး။
老公 lǎo gōng ကို တရုတ်စာနဲ့ ဘယ်နှစ်မျိုး ရေးလို့ရလဲ။
အကြွေးကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
မျိုးပြ စကားလုံး 把 bǎ
ပြည်နယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
跟 gēn က ဝိဘတ်လား၊ စကားဆက်လား။
အပိုင်းကိန်းတွေကို တရုတ်လို ဘယ်လိုဖတ်မလဲ။
ဆင်ဖြူတော်ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
နှစ်ခြမ်းခြမ်းပါကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောရလဲ။
ကွမ်းယာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
ဘတ်စ်ကားကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
好 hǎo က "အရမ်း" လို့ အဓိပ္ပာယ်ရလား။
错 cuò ရဲ့ အငြင်းကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
号 hào, 日 rì နဲ့ 天 tiān က ဘာကွာသလဲ။
အောက်စလွတ်တာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
တရုတ်ဘာသာမှာ Adj ကို N ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
鲍鱼 bào yú ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။